Ahoana no ahafahana maniry anana ao an-trano avy any an-tampony any an-trano - ahoana no hivoatra?
Ahoana no ahafahana maniry anana ao an-trano avy any ambony - torohevitra mahasoa ho an'ny mpandray anjara
Ny mpankafy zavamaniry any ivelany, fara fahakeliny, dia tonga amin'ny hevitry ny pineapple. Tsy ny florist rehetra no mahafantatra ny fambolena anana ao an-tampony, ka mahatonga azy ho tontolo iainana ahafahana mampitombo sy mitombo ao an-trano na trano. Raha ny marina dia mety ho an'ny olona izay tsy manana traikefa betsaka amin'ny fiompiana fambolena.
Ahoana no hambolena anana any an-trano?
Mba hahalalanao ny fomba hambolena anana ao an-trano sy ny fomba hambolena izany, dia mila mahafantatra ny toe-javatra iainana voajanahary aminy ianao. Ny pineapple dia zavamaniry mitovitovy amin'ny tany lemaka maina sy mafana, toy ny ravina misy ravina mafy, avy eo afovoan-trano izay mampitombo ny voninkazo. Amin'io koa ny voankazo izay hitanay amin'ny toeran'ny mpanamory fiaramanidina dia mifatotra.
Ny fanangonam-boankazo ao an-trano dia mety hitranga amin'ny fomba maro:
"Palm" (ravinala) misy taolana anana;
"Ankizy" (fitaratry ny hatsiaka) avy amin'ny orinasa lehibe iray;
Mitombo ny anana ao an-trano avy eny ambony
Ny pineapple dia afaka manome fizarana amin'ny latabatra. Azonao atao ny mametraka azy mivantana ao anaty vilany miaraka amin'ny santionany mety tsara ary maniry anana avy amin'izy ireo. Tsara ny milaza fa mila mitady olona iray izay afaka mihazona "ankizy" toy izany, satria tsy ny olon-drehetra no mitombo ny ambim-bary eo am-baravarankeliny! Azo atao ve ny maniry anana eny ambony? Azo antoka fa azo atao izany! Mividiana taolana anana manasaraka an'io "palma" io avy eo, manangona azy amin'ny tany, ary mihinana anana amin'ny fialam-boly ataonao manokana.
Ahoana no hambolena pineapple avy any ambony?
Alohan'ny hahafahanao mankafy ny pineapple eo amin'ny varavarankely, tokony hianatra haniry haniry ny pineapple ianao, hialana amin'ny fahadisoana. Voalohany dia mila mahita an'io tanjona io ianao. Tsara kokoa ny mividy anana amin'ny fambolena amin'ny fahavaratra na amin'ny fararano. Ny voankazo dia tokony hanitra ary hanala aroma marefo, ny volony dia marevaka, ny ravina dia maitso, elastika. Aza mitondra pineapple raha ny ravina dia malazo na mangatsiaka, mena "vovoka" amin'ny lokony, manana teboka (mety hanondro ny fahavoazana amin'ny bibikely).
Ahoana no hanapahana ny anana amin'ny fambolena?
Ny fomba tsotra indrindra dia ny manomana ny fitaovana fambolena amin'ny fanesorana ara-bakiteny ny "tuft" ravina avy amin'ny foetus. Algorithm of action:
Asio fonon-tanana mba hiarovana ny hoditry ny tananao amin'ny ravina maivana.
Maka ny rantsantanana iray amin'ny tanana iray akaiky kokoa ny fototry ny ravina tanteraka.
Tazony mafy ny foetus amin'ny tanana hafa.
Mangataha tsikelikely, fa miantoka amim-pahatokiana ny tendron-tsakafo, toy ny hoe esorinao ilay vintsy.
Zava-dehibe ny tsy manadino izany. Amin'ny voankazo masaka, ny tendrony dia tokony hesorina tsy misy olana, fa raha tsy mandeha izy, dia azo tapahina amin'ny antsy maranitra madio. Toy izao ny fomba hikapohana ny anana:
Mialà eo amin'ny bibilava 4-5 cm, makà cut.
Ny fihazonana ilay antsy eo ambanin'ny 45 °, dia manapaka ny raviny miaraka amin'ny fakan'ny ravina avy ao amin'ny pulp. Aza manimba ny fotony!
Ataovy azo antoka fa hozongozonina tanteraka avy eo amin'ny hazondamosina ny pulp, raha tsy izany dia hanomboka ny dingana hitranga ny fambolena.
Ahoana no ahafahana maniry anana eny ambony?
Ny fikorianan'ny anana dia manomboka amin'ny fanomanana ny tampony. Ny fomba tsotra indrindra hananganana anana ao an-trano avy any ambony:
Esory ny ravina ambany (2-3 santimetatra), mampiharihary ny tebitebin'ny fototarazo ho avy eo amin'ny tohin'ilay zavamaniry. Avy eo, rehefa mikasa ny hametraka ny tifitra ho any anaty rano ianao, dia tsy afaka manamaivana izany, fa alohan'ny handraisana izany amin'ny vahaolana malemy avy amin'ny permanganate potassium.
Toy ny sambo ho an'ny fanindroany ny sedra, manaova tahirin-drakitra (afaka mampiasa kaopy tsotra).
Ny rano dia tsy maintsy mitoetra amin'ny hafanana amin'ny efitra, madio, mijoro. Manova ny rano isaky ny roa andro, fa tsy mamela azy hitombo ny toetr'andro. Jereo ny haavon'ny rano.
Ampidino ny tebiteby ao anaty rano arakaraka ny haavon'ny tohatry ny fototarazo, raha tsy manoboka ny ravin'ny bakteria ao anaty rano.
Ny fitoeran-dabozia amin'ny tànana dia tokony hapetraka ao amin'ny toerana mafana sy mangatsiaka, voaaro amin'ny tara-masoandro mivantana, ny lozam-pandrefesana, ny drafitra ary ny biby fiompy. Tokony ho eo amin'ny 7-10 andro ny priklyucing ny fakany. Rehefa matanjaka izy ireo ary mitombo 2-3 cm, dia mety hamboly amin'ny tany ny zavamaniry.
Alohan'ny nambolena, esory avy ao anaty rano izy ary tandremo mandritra ny ora maromaro amin'ny lamba fanasan-damba, ary ataovy amin'ny plastika lavalava.
Ahoana no fomba hamongorana ny tendron'ny pineapple?
Ny fomba iray hafa haniry ny pineapple dia ny manongotra ny topy voaomana tsy voaloboka voalohany amin'ny rano. Ny top dia tapaka amin'ny anana amin'ny algorithm ambony. Tokony ho maina ny fotony alohan'ny hambolena mandritra ny herinandro vitsivitsy, amin'ny fanantonana ny "palmia" miaraka amin'ny ravina, hany ka mihamafy ny ratra eo amin'ny tavy. Alohan'ny hanangonam-boa, ny mpamboly voninkazo dia manamboatra lavenona amin'ny lavenona, izay tapaka amin'ny alàlan'ny charcoal ny fako ary ny fisorohana ny fahaverezana.
Manomàna vilany kely misy tanimanga. Apetraho ao amin'ny sphagnum loosely izy, ataovy lavaka eo amin'ny masajy ary tsindrio ny fototr'ilay bibikely. Apetraho amin'ny vilany ny vilany any amin'ny efitrano mamirapiratra (23-25 ​​° C) miala amin'ny masoandro mivantana. Rosette dia mivoaka matetika amin'ny basy. Azonao atao ny manarona ny zavamaniry amin'ny kapa mangatsiaka mba hamoronana mikrôla. Aza mandalo loatra! Raha miposaka eo afovoan'ny rosette ny ravina tanora - dia miorim-paka ny zavamaniry ka vonona ny hamboly amin'ny toerana maharitra.
Fambolena anana amin'ny vilany iray
Noho izany, manana tsimoka izahay miaraka amin'ny fakany. Ao amin'iza ny pineapple no manamboatra fomba iray hanamboarana toeram-ponenana sahaza ho an'ny zavamaniry? Ao amin'ny vilany dia tsy maintsy misy lavaka draina. Voalohany, makà vilany kely kokoa farafahakeliny mihoatra ny vala, eo amin'ny 15 santimetatra eo ho eo. Tsara kokoa ny manao ilay transshipment taty aoriana, amin'ny fampitomboana ny haben'ny ny vilany ho an'ny habeny. Koa satria ny fakan-javamaniry dia manakaiky ny faritra, dia tsy ilaina ny habetsahana lehibe.
Nandeha tany izahay:
Amboary ny tany. Andro maromaro alohan'ny hambolena, dia tsy manala azy amin'ny alàlan'ny fitsinjarana solika potassium permanganate na rano mangatsiaka. Amin'ny fotoan'ny fambolena, tokony ho maina ny tany, fa tsy mena.
Eo am-pototry ny vilany, dia asio lohasaha famokarana tanimanga, vericulite amin'ny ampahatelon'ny haavon'ny fitoeran-drano.
Fenoy ny vilany amin'ny tany voaomana, eo afovoan-trano dia manangom-pasika, ny habeny izay ahafahanao mamela malalaka ny fakany sy ny tongony ka hatrany amin'ny haavon'ny ravina.
Apetraho ao anaty lavaka ilay tavoahangy, ka tsy manimba ny fakany. Amin'ny tanany iray, tanterao ny zana-ketsa, ary ny faharoa dia mameno moramora amim-pahamalinana ny toerana manodidina ny pétrole, manosotra moramora ny tany amin'ny rantsantanana.
Mba hamokarana ilay zavamaniry dia azonao atao ny manamboatra azy amin'ny kitay hazo na plastika.
Omeo rano kely ny zavamaniry na hamafazana ny tany amin'ny basy.
Mamboly ny tany hambolena ny anana - sehatry ny fambolena bromeliads. Azonao atao ihany koa ny mamokatra ny tany, mifangaro amin'ny ampahany
tavoahangy - ampahany roa;
renirano - ampahany iray;
tany ala (na tanimbary) - ampahany telo
Anana amin'ny vilany - ahoana no hikarakarana?
Rehefa manana ravinkazo maitso ny zavamaniry, azontsika atao ny mihevitra fa vita ny dingana voalohany. Na izany aza, ho an'ny fikarakarana ny anana ao amin'ny vilany hitombo sy hivoatra tsy misy olana, dia mila ny fikarakarana sahaza azy izy:
Toerana - toerana maizimaizina, tsy misy masoandro mivantana.
Fitondrana temperatures - 23-27 ° С
Ny fitondrako dia be dia be fa tsy matetika. Eo anelanelan'ny fandroana ny tany tokony ho maina.
Sakafo - isaky ny roa volana amin'ny fehiloha .
Ny fofona avy amin'ny mpamafy isan'andro, ny pineapple dia tia rivotra mafana.
Izany no fahendrena, ahoana no ahafahana maniry anana ao an-trano avy any ambony! Afaka mamorona tanimboly iray manontolo ianao eo am-baravarankely, mahagaga ny vahiny ary manao ny voankazo mahasalama. Ny fitandremana ireo fitsipika momba ny fikarakarana, dia azo atao ny maka zavamaniry iray tsara tarehy sy matanjaka ary mahavariana avy amin'ny ravina toa tsy misy ilana azy, izay, araka ny mahazatra, dia miditra amin'ny tratra.
Fambolena hazo amin'ny lohataona
Miady amin'ny phytophthora amin'ny voatabia volom-bahoaka
Ficus Benjamin - fikarakarana
Ampel Bacop - mitombo avy amin'ny voa
Arcs ho an'ny trano fonenana
Seza tany Vietnam
Snowflake avy amin'ny kofehy
Emilia Clarke dia voalaza ao amin'ny fifanekena ny fandavana ny sehatra ara-nofo ao amin'ny "Game of Thrones"
Tiffany ny peratra - ahoana no hanavaka ny tsangambato Tiffany voalohany amin'ny sandoka?
Basmati vary - tombony
Fombafomba ho fiarovana ny fanambadiana
Nitsimoka lentils - tsara sy ratsy
Fanitsiana ny ovy eo alohan'ny hambolena solifara varahina
Ny koprograma - ahoana no hakana azy io?
Areti-mifindra - aretina, fitsaboana
Patriotic Corner tao amin'ny kindergarten